Kutyorwa kweKodzero dzeVanhu muBelarus Kwanyanyisa
Mbudzi 21, 2020
Sangano rezvekudzivirirwa pamwe nemushandira pamwe munyika dzemuEurope, re Organization for Security and Cooperation in Europe,kana kuti OSCE, rakaburitsa gwaro rinoratidza kutyorwa zvakanyanya kwekodzero dzevanhu muBelarus zvichiitwa nehurumende yaVaAleksandr Lukashenka munguva yesarudzo dzakabiridzirwa muna Gunyana, uye mushure mesarudzo idzi.
Sangano iri rinoti chinangwa chaVaLukashenka mukutyora kodzero pamwe nekusunga vanhu ndechekuomesera vanhu vanoda kuratidzira uye kutyityidzira vachada kuzoratidzira.
Kutyorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira murunyararo, vanopikisa pamwe nevatori venhau, kunosanganisira kutochwa kwevanhu, kusungwa, kumbunyikidzwa kuti munhu asataure akasununguka, pamwe nekurambidzwa kuungana kwevanhu murunyararo.
Munyori wegwaro iri, uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo yepasi rose, Muzvinafundo Wolfgang Benedek, vanoti zvonosuwisa kuti hapana ati amiswa mumatare nenyaya yekumbunyikidza vanhu. Muzvinafundo Benedek vanoti kusasungwa kwevapari vemhosva ava kunoburitsa pachena, kuti munyika iyi, kodzero dzevanhu dzinotyorwa pamadiro uye hapana matare anotonga zvejekerere vanopikisa hurumende.
Kuratidzira kwevanhu vakawanda kuri kuenderera mberi mu Belarus kubva zvatanga kupikiswa sarudzo, izvo zviri kuisa VaLukashenka, avo vatonga kwemakore makumi maviri nematanhatu, panguva yakaoma, asi vachiramba kuti sarudzo dzakabiridzirwa.
Masangano enhau anoti VaLukashenka vari kusimbaradza hutongi hwavo nekuvhara muganhu wenyika uri kumadokero, kubvisa gurukota rezvemukati munyika, uye kukurudzira mauto nemapurisa kuti arwise vose vanenge vachiratidzira.
“America inoti inofadzwa nehushingi hwevanhu vemu Belarus,” vadaro gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaMike Pompeo. Vanotiwo “America icharamba ichikomekedza hurumende yemu Belarus kuti imise kusunga kwairi kuita vanhu, uye kuti inzwe zvichemo zvevanhu vanoda sarudzo dzakachena dzinoitswa pasi pemasangano akazvimirira.”
Zviri kukurudzirwa neOSCE zvinopa hurumende yemuBelarus mukana wekupedza gakava riri munyika iyi. Izvi zvinosanganisira kupinda munyika iyi kwenhumwa dzeOSCE kunoona zviri kuitika; kumiswa kwemhirizhonga iri kuitirwa vanhu vemu Belarus; uye kuona kuti vose vari kutyora mitemo, varangwa. Gwaro iri rinotiwo vose vakasungwa vabnofanirwa kuuritswa muhusungwa, uye munyika iyi munofanirwa kuva nenhaurirano dzechokwadi, dzinopindwa nemapoka ose.
Hurumende yeAmerica inoti inomira nevanhu vemuBelarus panguva iyo vari kutsvaga hutongo hwejechetere.
Kodzero dzeVanhu Dzotyorwa Zvakanyanyisa muBelarus